Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguLysanne
Amanyathelo ambalwa ukusuka epaki yomlambo yaseBatiscan kunye nemizuzu embalwa ukusuka eTrois-Rivières. Kwisibini (ubuninzi babantu aba-4). Ubume kunye nolonwabo lwemisebenzi emininzi yepaki (ukunyuka, ukukhwela iphenyane, ukukhwela inqanawa, ukuloba, ukukhwela ibhayisekile entabeni, i-geocaching, imisebenzi ekhokelwayo, ukuzonwabisa) kufutshane kakhulu nesiphithiphithi sedolophu yaseTrois-Riv. kunye nazo zonke ezinye izinto ezinomtsalane ezinokuthi zinikezelwe ngummandla. Yenza i-chalet du dam yakho ibe yi-terre okanye ukonwabele nje umzuzu kwi-chalet enikezela ngayo yonke intuthuzelo eyimfuneko.
Igumbi lokulala elikhulu elibekwe phezulu, isilingi yecathedral, ithambile kwaye irustic enebhafu kunye nebhedi yesofa enokuhlala umntu omdala okanye abantwana ababini. Ugcino oluncinci kakhulu lokushiya indawo.
Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokutyela elikhulu, iifestile ezininzi.
Igumbi lokuhlambela elikhulu elingavakaliyo, elineshawa enkulu yeceramic.
indawo encinci yokuhlamba impahla
Ipatio enkulu entle ixhotyiswe ngokupheleleyo ngasemva ngetafile kunye nezitulo, enendawo yomlilo kunye nebbq ejonge indawo enamahlathi kunye nomsinga. Iinkukhu zabamelwane ngamanye amaxesha ziza kudlula eyadini ... i-rustic, izolile ...
Ilungele isibini, kodwa ifanelekile ukuhlala nabantwana (i-2 ikhululekile kwibhedi yesofa) okanye i-3 yabantu abadala.
Ugcino luncinci ukwenzela ukwandisa indawo yokuthuthuzela ngakumbi ngexesha lokuhlala kwabantu abangaphezu kwe-2.
Izilwanyana zasekhaya zamkelwe kodwa kufuneka zigcinwe kwintambo xa zingaphandle ngamaxesha onke (intsalela yeedola ezingama-30 / ukuhlala)
Umphezulu wamanzi kakuhle, kufuneka silumkele ukusetyenziswa kwamanzi ukuze singagqibi iqula, sixhomekeke kwindalo yomama.
4.27 · Izimvo eziyi-26
Ibekwe kumqolo, itrafiki encinci, kwilali encinci
Umbuki zindwendwe ngu- Lysanne
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Saint-Narcisse